Ibhokisi Lokwakha Nama-Mechanical Assembly - IPandawill Technology Co., Ltd
Ngaphezu komhlangano webhodi wesifunda (PCBA) ophrintiwe, sinikezela ngomhlangano wokuhlanganiswa kwamabhokisi wamasistimu amancane namamojula kanye nokuhlanganiswa okugcwele komkhiqizo. Ngokusebenzisa inethiwekhi yethu yabahlinzeki abathandayo, thina, enkampanini ye-Asteelflash EMS, sikusekela kusuka ku-A kuye ku-Z, kusukela kwikhotheshini kuya esigabeni sokukhiqizwa kwephrojekthi yakho.
Zonke izinsizakalo ezingaphansi kophahla olulodwa, amaqembu asetshenziselwa umkhiqizo wakho, ayizithako eziyinhloko zokungena ezimakethe ngokukhululekile.
Ukudlulela ngale kwe-PCBA, sinikela ngokuhlanganiswa kwamabhokisi nokwakhiwa kwamabhokisi ngokusetha imigqa yomhlangano ozinikele wamakhasimende.
Ukugxila ekuthuthukisweni okuqhubekayo, siyazibophezela ekwandiseni nasekuhleleni inqubo yenhlangano ngaso sonke isikhathi, ukuyenza iphumelele kakhudlwana kumakhasimende ethu futhi ngenxa yalokho incintisane kakhulu ezimakethe zawo. Ngezinsizakalo zethu zokukhiqiza ezisezingeni eliphakeme, izindawo zokukhiqiza ezinikezelwe namaqembu, aqeqeshelwe ukwenza kahle ukwenza umhlangano wokwakha amabhokisi ezingeni eliphakeme kakhulu lekhwalithi, siyazibophezela ekukusekeleni nasekukhuliseni isikhundla sakho emakethe yakho, njengesandiso seqembu lakho .
Njengenkampani ekhiqiza izinkontileka ngogesi, sihlose ukuletha iklayenti lethu lisebenze kahle.
Sikholelwa eqenjini nasekusebenzisaneni ngokubambisana, sisekela umkhiqizo wakho esigabeni sokuklama kepha futhi nasekupheleni kwempilo yomkhiqizo wakho, sisebenzela ukuletha isizukulwane esisha empilweni. I-Asteelflash, umlingani wakho we-Electronic Manufacturing Services (EMS) wezinsizakalo zobunjiniyela nezokukhiqiza, kusuka ku-A kuye ku-Z.
Izixazululo zethu zokukhiqiza ngogesi ku-Box Build:
• Inhlangano eyinkimbinkimbi ye-electro-mechanical
• Ukugqoka Okufanayo
• Ukuhlolwa okusebenzayo